हेलिकप्टर दुर्घटनाबारे नयाँ तथ्यको खुलासा ! भिटु ट्रयाकरबाट जानकारी भयो यस्तो ! - सुदूर नेपाल
हेलिकप्टर दुर्घटनाबारे नयाँ तथ्यको खुलासा ! भिटु ट्रयाकरबाट जानकारी भयो यस्तो !
Dinesh khaptadi March 2, 2019 0
ताप्लेजुङ – पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित सातजना सवार हेलिकोप्टर पाथीभरा मन्दिरबाट उडेको ३४ सेकेन्डमै दुर्घटनामा परेको देखिएको छ। भिटु ट्र्याकर प्रविधिले त्यस्तो अवस्था देखाएको हो। भिटु ट्याकर भनेको हेलिकोप्टरमा रहेको जीपीएस डीभाइसको सहयतामा इन्टरनेटमार्फत हेलिकोप्टरका सबै गतिविधि नियाल्ने प्रविधि हो। यो प्रविधिका अनुसार हेलिकोप्टरले बुधबार १२ बजेर ३४ मिनेटमा पाथीभरा मन्दिरमा रहेको हेलिप्याडबाट भुँइ छाडेको देखिएको छ। नागरिक दैनिकले समाचार छापेको छ ।
पाइलटहरूका अनुसार हेलिकोप्टरको पङ्खामा बरफ जमेपछि इन्जिनको गति कम हुने गर्छ। अहेव पौडेलले हिमपातबारे दिएको जानकारीलाई आधार मान्ने हो भन हेलिकोप्टरको पंखामा बरफ जमेको अनुमान गर्न सकिन्छ। तीव्र वेगको हावा चलेका र बरफ जमेका कारण पंखाको गतिमा आएको सुस्तताले हेलिकोप्टरलाई असन्तुलित बनाएको हुन सक्ने अड्कलबाजी गरिएको छ। भार थपिनु र हेलिकोप्टरले लिएको गलत दिशाका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने अनुमान गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। जानकारहरूका अनुसार हेलिकोप्टरको इन्जिनको क्षमता कति बढाउने भन्ने विषय पंखाको गतिले निर्धारण गर्छ। पंखाको गति जति बढी भयो इन्जिनको क्षमता पनि त्यति नै बढी हुन्छ र हेलिकप्टरलाई कुन कोणमा कति डिग्री घुमाउने भन्ने विषय पनि पंखामै निर्भर गर्छ। उडिसकेपछि हेलिकोप्टर पंखाको नियन्त्रणमा हुन्छ।यो ताजा खबर बाट साभार गरिएका हु ।
Previous Post: नेकपाका नेता:पुर्व अर्थमन्त्री अधिकारीको स्वास्थ्य गम्भीर
Next Post: छोराले सधैंका लागि वाईवाई भन्दा कसको आमाको मन रुदैन